Wakiilo ka socda Ruushka & Ukraine oo wada hadlaya!
Monday March 07, 2022 - 08:34:11 in Wararka by Sahal Muqdisho
Waagacusub.com:- Wakiilo kala matalaya Ruushka iyo Ukraine ayaa wareeggii saddexaad oo wadahadal ah isku arkaya si xal loogu helo dagaalka 12ka cisho ka socda qaybo kamid ah Dhulka Ukraine oo uu weeraray Ruushka.
Ergada ayaa si qoto dheer uga hadli doonta sidii loo heli lahaa nidaam xabad-joojin si loo yareeyo weerarada Ruushka ee Ukraine oo sababay dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur xooggan oo dalka soo gaaray.
Moscow & Kyiv ayaa doonaya soo afjaridda dagaalka billawday 24-Feb-2022, Ukraine ayaa wadahadalka u aragta in ay muhiim u yihiin howlaha geedi-socodka nabadda iyo joojinta dagaallada xooggan.
Dagaalka labada dal ee deriska ah ayaa saameyn taban ku yeeshay Qaaradda Yurub, waddamada Ukraine ku dhiirageliyay iska caabbinta Ruushka ayaa laga waayay kaalintooda kaddib markii ay kusoo koobmeen cambaareyn & dhaliil.